December 2021 - Online Hartha
December 31, 2021 by Online Hartha
ရေနွေးကြမ်း အိုးထဲ က လက်ဖက်ခြောက်ဖတ် တွေ မလွှင့်ပစ် ဘဲ သုံးတတ်ရင် အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား ဈေးက ဝယ်လာတဲ့ ငါးက တော်တော်ညှီတဲ့ ငါး ဆိုရင် လက်ဖက်ခြောက်ဖတ် နဲ့ အတူ ညှီနေတဲ့ငါးကို အိုးတစ်ခုတည်းထည့်ပြုပ်လိုက်ပါ။ ငါးညှီနံ လုံးဝ ပျောက်သွား ပါလိမ့်မယ်။ လက်ဖက်ခြောက်ဖတ် တွေကို ရေအေးနဲ့ ရောပြီး မှန်ပြတင်းပေါက် အိမ်သုံး ပစည်းနဲ့ ရွှံ့ပေနေတဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်တွေ ကို ဆေးကြော ပွတ်တိုက်ပါ။ ပြီးမှ အဝတ်သန့်နဲ့ ပြန်သုတ်လိုက်ပါ။ သန့်ပြီး တောက်ပြောင် သွားပါလိမ့်မယ် လဖက်ခြောက်ဖတ် တွေကို ရေအေးနဲ့ ရောစပ်ပြီး မြေသြဇာရည် အဖြစ် အပင်တွေ ကို လောင်းပေးနိုင်ရင် သဘာဝ မြေသြဇာ ကို … Read more
December 30, 2021 by Online Hartha
အခုတဈလောအမေးမြားနတေဲ့ ငှကွေေးခကျခဲမှု တှအေဆငျပွစေရေနျ အခုတဈလောမေးနကွေတာက ငှကွေေးခကျခဲမှု ဘယျတော့ပြောကျမလဲ ဆရာမနညျးလမျးလေးတဈခုပွောပွမယျ ဇှဲရှိရှိလုပျကွဘို့တော့လိုပါတယျ တနလျာနံဖွဈတဲ့ငှကေိုနိုငျဘို့ တနလျာနံရဲ့ဆပှတျ သူ့ကိုနိုငျလိုဆကိုခို ဆိုသလိုစနနေမှေ့ာပွုလုပျကွရပါမယျ (1)မိမိတို့ရဲ့ ခွသေညျးလကျသညျးဆံပငျဖြားစတိ ကို ညှပျပွီးမိမိတို့ရဲ့ဘုမ်မိအရပျကိုပဈရပါမယျ (2)သုဂတော ကို ပုတီးဆယျပတျစိပျ ဘုရားကိုပူဇျောရပါမယျ (3)အထညျဟောငျးကိုမရှိသူပေးမလား စှနျ့ပဈမလား.လုပျရပါမယျ (4)မိမိတတျနိုငျသလောကျငှကွေေးကို အလှူခံပုဂ်ဂိုလျကိုလှူပေးရပါမယျ (5)အမှိုကျတှရှေငျး သနျ့ရှငျးရေးလုပျပဈရပါမယျ (6)ထမငျးစားခနျး မီးဖိုခြောငျမြားကိုသနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးထားပေးရပါမယျ (7)မိမိတို့အိမျမကျြနှာစာအခနျးမှာကကျြသရရှေိသောပုံကားမြားခြိတျရပါမယျ လှပသောပုံမြား *ရီမောနသေောမိသားစုပုံဆိုပိုကောငျး.*ခြိတျပေးရပါမယျ (8)တတျနိုငျသလောကျ ဘုနျးကွီးကြောငျးအားတိုငျကပျနာရီလှူခွငျး (9)သကျကွီးရှယျအိုမြားအား.စိပျပုတီးလှူခွငျး.နှားနို့ထမငျးဝခွေငျး (10)အပတျစဥျ သိုမဟုတျ တဈလ တဈကွိမျ ပွုလုပျကွပါ ကံပှငျ့ကံကောငျး၍လိုရာပွညျ့စုံတျောမူကွပါစေ Dawniniaung 09421146014 အခုတစ်လောအမေးများနေတဲ့ ငွေကြေးခက်ခဲမှု တွေအဆင်ပြေစေရန် အခုတစ်လောမေးနေကြတာက ငွေကြေးခက်ခဲမှု ဘယ်တော့ပျောက်မလဲ ဆရာမနည်းလမ်းလေးတစ်ခုပြောပြမယ် ဇွဲရှိရှိလုပ်ကြဘို့တော့လိုပါတယ် တနလ်ာနံဖြစ်တဲ့ငွေကိုနိုင်ဘို့ တနလ်ာနံရဲ့ဆပွတ် သူ့ကိုနိုင်လိုဆကိုခို ဆိုသလိုစနေနေ့မှာပြုလုပ်ကြရပါမယ် … Read more
ဒီလို ရှပွေ့ေးနိမိတျတှေ မွငျတှရေ့ငျ သငျ့ဆီကို ကံကောငျးခွငျးတှေ မကွာမှီရောကျရှိ လာတော့မယျ လူတဈယောကျ ကံကောငျးလာတော့ မယျဆိုတာကို ရှပွေ့ေးနိမိတျတှေ ကွညျ့ပွီး သိရှိနိုငျပါတယျ…နိုငျငံတိုငျးမှာတော့ ကံကောငျးခွငျးရဲ့ နိမိတျကင်ျကတေတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အယူအဆ အမြိုးမြိုး ရှိနတေကျ ပါတယျ အယူအဆ အမြိုးမြိုးထဲကမှ လူအမြားစု နား လညျ လကျခံ ယုံကွညျ ထားတဲ့ ကံကောငျးခွငျးရဲ့ နိမိတျသင်ျကတေတှေ လညျး ရှိပါတယျ။ သငျ့ဆီကို ကံကောငျးခွငျးတှေ မကွာခငျ ရောကျရှိ လာတော့မယျ ဆိုရငျ ဒီလိုရှပွေ့ေးနိမိတျ သင်ျကတေတှေ ကို မွငျတှေ့၊ ဖွဈပျေါ ရတတျပါတယျနျော။ ငှကျတှေ အသိုကျလာဖှဲ့တာ – ငှကျတှကေ သငျ့ရဲ့ နအေိမျ၊ တိုကျခနျး (သို့) ရုံးခနျး၊ … Read more
ကားတစ်စီးကို ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချက်(၁၀) ချက် ကိုရွေးချယ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ၁။ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို စစ်ဆေးလဲလှယ်ပါ။ အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ Filter ကို ပုံမှန် စစ်ဆေးပြီး အသစ်လဲပေးတာက အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ကြာရှည် စေပါတယ် ၂။ တစ်နှစ် ကို တစ်ကြိမ် ရေတိုင်ကီနဲ့ အအေးပေး စနစ်ကို ဆေးကြောပေးပြီး coolant ကိုလည်း အသစ် လဲလှယ်ပေးပါ။ coolant နဲ့ ပေါင်းခံရေကို အချိုးတူ ရောစပ်အသုံးပြုတာက အအေးပေးစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ရေတိုင်ကီနဲ့ ပိုက်လိုင်းတွေထဲမှာ အနည်ထိုင် ပျက်စီးတာကို ကာကွယ် ထားနိုင်ပါတယ် ၃။ ဂီယာဆီတွေကိုလည်း လဲလှယ်ပေးပါ။ မကြာခဏ လဲပေးဖို့ မလိုပေမယ့် သတ်မှတ်ချိန် တစ်ခုထားပြီး လဲပေးရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီတွေ … Read more
တောကြက်ဥ၊ အိမ်ကြက်ဥ နဲ့ စီပီကြက်ဥတို့ကို ကွဲပြားစွာသိဖို့နှင့် ဆေးဖက်ဝင်ပုံများ
တောကြက်ဥ၊ အိမ်ကြက်ဥ နဲ့ စီပီကြက်ဥတို့ကို ကွဲပြားစွာသိဖို့နှင့် ဆေးဖက်ဝင်ပုံများ တောကြက်ဥ မမြင်ဖူးသူ တွေအတွက် တောကြက်ဥ၊ အိမ်ကြက်ဥ၊ CP ကြက်ဥတို့ကို ယှဉ်ပြထား တာပါ … ရောင်းရန်မဟုတ်ပါ … နောက်အလျှင်း သင့်လျှင် ရေကြက်ဥ၊ ရေဘဲဥ၊ ဒင်ကျီးဥများနှင့် ဟင်္သာဥများ ကိုပါ ရှာဖွေကာ တင်ပြ ပေးပါမည်။ တောကြက်ဥ …… တော အစပ်တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အပင် ခပ်လတ်လတ် ကိုင်းခြုံ ဆူးခြုံများရှိ အသိုက်များတွင် တွေ့ရသည်။ တစ်လုံးမှစ၍ အများဆုံး ၅ လုံးခန့်အထိသာ တွေ့ရတတ်သည်။ ရှားပါး၍ ဆေးဖက်ဝင်သည် ဟုဆိုကြ၍ တရုတ်သမားတော် များက အဝယ် များသည်။ ယခင်ကပေါများသော်လည်း လက်ရှိအချိန်၌ ရှားပါးနေပြီဖြစ်သည်။ တစ်လုံးလျှင် … Read more
ခိုင်မြဲသော စီးပွားရေးကိုထူထောင်လိုသူများအတွက် နည်းလမ်း
December 29, 2021 by Online Hartha
ခိုင်မြဲသော စီးပွားရေးကိုထူထောင်လိုသူများအတွက် နည်းလမ်း လူတိုင်း ချမ်းသာ လိုကြသည်။ သို့သော် လုပ်သူတိုင်း စီးပွားမဖြစ်ပေ။ ချမ်းသာလိုပါက…. က။ လောကုတ္တရာ စည်းကမ်း ခ။ လောကီစည်းကမ်း … နှစ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ က။ လောကုတ္တရာ စည်းကမ်း ၅ပါးသီလ လုံရမည်။ အထူးသဖြင့် (မုသာဝါဒ-လိမ်ညာပြောဆိုခြင်း) လုံပါစေ။ ဈေးနှုံးကိုမေးလျင် ရောင်းနိုင်မည့်ဈေးကိုသာပြောပါ။စကားအပိုမပြောရ။ အချို့က လိမ်ညာပြီး မိမိ ဝယ်ဈေး ကို မြှင့် ပြောသည်။ အချို့က ကျိန်တွယ်ပြီး (မောင်ကြီးနှမ ကျားကိုက် သေရပါစေရဲ့) ဟု လိမ် ညာ ပြောသည့် အပြင် ကျိန်တွယ် တတ်ကြ၏။ မိမိ ရရှိသော အမြတ် မှ (၅%) ကို အိမ်ရှိ … Read more
သငျ့ရဲ့ဖုနျးကို အမွနျပကျြစီးစနေိုငျတဲ့ အမှတျတမဲ့ ပွုလုပျနမေိကွတဲ့ အမှားမြား
သူ့မှာ ကိုယျတှငျးအင်ျဂါအစိတျအပိုငျးတှလေညျး ပါသလို၊တဈခုခု ခြို့ယှငျးတာနဲ့ လုပျဆောငျမှုတှကေို ကမောကျကမဖွဈစနေိုငျတဲ့ သကျရောကျမှုတှလေညျး ပါရှိပါတယျ ဒီတော့ ဖုနျးတဈလုံးဟာ သကျရှိသတ်တဝါတဈကောငျနဲ့ တူတယျဆိုပါစို့။ပိုငျရှငျက ဂရုမစိုကျရငျ ဖုနျးရဲ့ ကနျြးမာရေးကလညျး ကောငျးမှာ မဟုတျပါဘူး။ အခု ဖျောပွခငျြတာကတော့ သငျ့ရဲ့ဖုနျးကို ပကျြစီးစနေိုငျတဲ့၊ အမှတျတမဲ့ ပွုလုပျနမေိကွတဲ့ အမူအကငျြ့တှပေါ (၁) Source တှကေို မစူးစမျးမဆငျခွငျပဲ ဝငျရောကျခွငျး အခုတလောမှာ iPhone ဖုနျးပေါကျတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ မကွာခဏ ကွားရလရှေိ့ပါတယျ တကယျက အဲဒါဟာ ဟကျကာတှကေနေ တီထှငျထားတဲ့ လှညျ့စားမှုဆိုတာ လူတိုငျး အသိနညျးပါတယျ ဒီတော့ မခိုငျမာတဲ့ Source တှေ၊ Recommended ပေးမထားတဲ့App တှကေို လုံးဝမသုံးသငျ့ပါဘူး။ဗိုငျးရပျဈတှလေညျး အလှယျတကူ ဝငျရောကျနိုငျပါတယျ (၂) အပူလှနျတဲ့နရောမှာ ထားရှိခွငျး … Read more
ဝမ်းရေးက တစ်ပုံ ၁၀၀၀ အဲလောက်တောင်ခက်ခဲတာတဲ့လား?
ဝမ်းရေးက တစ်ပုံ ၁၀၀၀ တဲ့လား? ဝမ်းရေးအတွက် တစ်ပုံ ၁၀၀၀ ဖြင့်ပန်းချီဆွဲပြီးရောင်းနေတဲ့ အဖိုး ကြုံရဆုံရလူလောက သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ်ထွာမို့သာတော်ကာကျပါရဲ့ ဝမ်းတတောင်ဆိုရင်လွယ်မယ်မထင်။ လူအမျိုးမျိုးစိတ် အထွေထွေ အဲ့တာကြောင့်လည်း လူတွေလုပ်ကိုင်ရှာဖွေစားသောက်နေထိုင်ပုံတွေ မတူကွဲပြားနေကြတာ။ တစ်ချို့ကလည်း အလွယ်နည်း တောင်ရမ်း စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်းကြ၊တစ်ချို့ကလည်း ခိုး၊ဆိုး၊ လုနှိုက်စာသောက်ကြတယ်၊အဲတစ်ချို့တော့လည်း ကိုယ်တက်ထားတဲ့ ပညာလေးနဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတယ်။ အခုလည်း အသက်ကြီးနေပြီ‌ပေမယ့် သူတက်ထားတဲ့ ပန်ချီပညာလေးနဲ့ ပုံလေးတွေဆွဲပြီး ရိုးသားစွာ ရှာဖွေစားသောက်နေရှာတဲ့ အဘ တကယ့်ကိုလေးစားဖွယ်ပါ။စိတ်ကောင်းလည်းဖြစ်မိတယ်အဘရယ်…? အဘ “ပုံတစ်ပုံ ဘယ်လောက်လည်း”မေးတော့ “တစ်ထောင်တဲ့ “သမီးကို ဒီပုံထက်လှတာဆွဲပေးမလား”မေးတော့“အဘလည်း ဒီလိုပုံတွေပဲဆွဲ တတ်တယ်တဲ့” ဟန်မဆောင်တတ်ပဲရိုးသားစွာပြန်ဖြေတယ်။သူတတ်တဲ့ပညာလေးနဲ့ ရှာဖွေစားသောက်နေတာအင်းစိန်ဈေးကြီးမှာပါ တွေ့ရင်အားပေးကြပါဦးနော်…တစ်ထောင်ဆိုတာ သာမန်လူတွေအတွက်ဘာမှမများပါဘူး။ အဘအတွတော့ဝရေးအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ……..။ Crd Unicode Version ဝမျးရေးက တဈပုံ ၁၀၀၀ … Read more
အမွဈ၊အပှငျ့၊အသီး အတှကျ 1: 1: 1 အခြိုး အားဆေးလေးပါ1-ပါတျအတှငျးသိသာလာ ပါလိမျ့မညျ အထူးသဖွငျ့ အပငျမှအပှငျ့ အပှငျ့မှအသီးအတှကျ အထူးကောငျးမှနျပါတယျရှငျ့။ လိုအပျသောကုနျကွမျးမြားနိုိ့ -200 cc တဘူးး ၊ပုဇှနျ ငါးပိ တဇှနျး ၊အခြိုမှုနျ့တဇှနျးတို့ပါဘဲ။ပွုလုပျပုံခှကျတခုထဲ ရနှေေး နှေး-2 ဇှနျးခနျ့ထညျ့ပါ ပုဇှနျငါးပိ တဇှနျးထပျထညျ့ ပွီးပြျောသှားအောငျမှပေါနောကျထပျ အခြို မုနျ့တဇှနျး ထပျထညျ့ကာ ကအြေောငျမှပွေီး နို့200cc ထပျထညျ့ အားလုံးသမ အောငျမှပေါ။အသငျ့ သုံး 1:1:1 အားဆေးလေးရပါပွီသုံးစှဲရနျအသငျ့ သုံးဆေး 1-ဇှနျး၊ ရေ တလီတာပါ20-လီတာ ဆေးဖနျြးပုံးအတှကျ 20ဇှနျးပါ ရှငျ ။တပါတျအတှငျးသိသာ ပါလိမျ့မယျ။ မပငျြမရိဘူးဆိုရငျတော့ တပါတျတကွိမျ ဖနျြးနိုငျပါတယျအပငျသေး ငရုပျခရမျးခဉျြအစရှိသညျတျု့ကို အပငျ ထိပျမှစတငျ ပကျဖနျြးပါ ။ဆေးမြားကိုစိုရှဲအောငျဖနျြးပါကပိုမိုထိရောကျပါတယျအရှကျ အပှငျ့ကကလြာသော … Read more